အကြိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း | FLEGT
VPA လုပ်ငန်းစဉ် ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းအဆင့်
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် (VPA) လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကြိုတင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသည့်အဆင့်အချိန်အတွင်း သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံနှင့် EU တို့သည် VPA လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကြိုးပမ်းရှာဖွေကြပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ စတင်လုပ်မည်၊ မလုပ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ရရန် ၎င်းတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများရှိပြီး အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်း
သစ်တောကဏ္ဍနှင့်၊ ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ဤကဏ္ဍအား တိုက်ရိုက်ပါဝင်သူ သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသူ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား သတိမူလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့များအကြား VPA မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် အဓိကကိစ္စများကို အရေးပါမှုအလိုက် စီစဉ်ခြင်း
VPA မှ ရရှိလာနိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် နောက်ဆက်တွဲများကို ရယူနိုင်ခြင်း
ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်အဆင့်ကြာမြင့်ချိန်သည် နိုင်ငံများအကြား ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဂါနာတွင် နိုးကြားသည့် အသိမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂ဝဝ၅ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၅ခုနှစ် မေလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောအမျိုးသားအဆင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှေ့သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြားကျယ်ပြန့်သောသဘောတူညီမှု အဖြေထွက်ခဲ့သည်။ ဂါနာ အစိုးရသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ဆန္ဒကို၂ဝဝ၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် EUအားတရားဝင် အကြောင်းကြားခဲ့ သည်။
သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတိမူမိလာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
အပူပိုင်းဒေသရှိသစ်တင်ပို့ခြင်းနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများသည် EU သစ်တောဥပဒေအကျိုးသက် ရောက်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မှစ၍ လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် VPA အား စိတ်ဝင်စားလျှင် EU ထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ EU၊ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ FLEGT ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသူများ၊ EU FLEGT Facility၊ အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် FAO ကဲ့သို့ UN အေဂျင်စီများသည် သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြားအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ VPAs များကိုနားလည်နိုင်ရေးကူညီရန် အခြား အထောက်အပံ့များပေးပါသည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှ အစိုးရများနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များသည်လည်း သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းကို အောက်ပါ လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ။
ဝန်ကြီးဌာနများ၌ VPA လုပ်ငန်းစဉ်အား ထောက်ပံ့မှုအားကောင်းလာစေရန် အမျိုးသားအဆင့် မူဝါဒချမှတ်သူများပါဝင်လာစေခြင်း
သစ်တောကဏ္ဍကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်စနစ်များကဲ့သို့သော ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစသည့် သက်ဆိုင်ရာများကို လေ့လာခြင်း
VPA ဆွေးနွေးပွဲများပြီးဆုံးပြီး သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများ လေ့လာခြင်း
ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ပြောင်းလဲမှုများလေ့လာရန် EU သို့ အလည်အပတ်သွားခြင်း
VPA မှ ရနိုင်သော ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်၊ လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု (' နည်းပညာပိုင်း လေ့လာမှု' ကိုကြည့်ပါ)များကို ကော်မရှင်ဖွဲ့ လေ့လာခြင်း
ဒေသတွင်း သတိမူလာစေရန် နေရာဒေသအသီးသီးသို့ ပညာပေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း
ယေဘူယျ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ VPA ၏ ရှုပ်ထွေးလှသည့်နည်းပညာပိုင်း သတင်းအချက်အလက်များကို အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ နားလည်နိုင်မည့် ဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲများ စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်သင့်သည်။ သို့ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့များအတွင်း နှင့် အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေခြင်းက အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် VPA အားလုပ်၊ မလုပ်ဆိုသည့် အများဆန္ဒရရှိရန် ပထမဦးစွာ အတူတကွဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းကြရမည် ဟုဆိုလိုပါ သည်။
ထို့ကြောင့် အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးအနေဖြင့် အလားအလာရှိသော ကုန်ကျစရိတ် နှင့် အကျိုးအမြတ်များနှင့် ၎င်းတို့အတွက် VPA သည် လက်တွေ့တွင် မည်သည့် အရာကိုဆိုလိုသည် စသည်တို့ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမြင်များ ဖလှယ် ခြင်းမပြုမီ VPA သည် ၎င်းတို့အတွက် အကျိုးရှိ၊ မရှိကို ၎င်းတို့အကြားမကြာခဏ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအစိုးရသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်လာစေခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးရန် တာဝန် ရှိသည်။ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံအများစုတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲဆက်လက်လုပ်မလုပ်ကိုမဆုံးဖြတ်မီ အစိုးရ များသည်အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် နှင့် VPA ၏ တန်ဖိုးနှင့် VPA မှဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျယ်ပြန့်သော အများဆန္ဒထွက်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှုများတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
ခွဲခြားရွေးထုတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်လမ်းကြောင်းများပြုလုပ်နိုင်မည့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက်စေရန် အခြားသော ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းပုံများ တည်ထောင်နိုင်မည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြောင်းကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
VPA အကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအကြား ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းများဖြစ်လာစေရန် အားပေးခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ VPA မှ ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု ၎င်းတို့ထင်မြင်ယူဆသည့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှာဖွေပေးမည့် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခွင့်ပြုခြင်း
အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများသည် အောက်ပါ အကြောင်းကိစ္စများအတွက် ပွင့်လင်းသော စကားဝိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါလိမ့်မည်။ ။
တရား၀င်သစ်ကို မည်သို့ ခြေရာခံပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုမည်
ယနေ့အချိန်ထိ အတွေ့အကြုံက ဆွေးနွေးပွဲများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်များကို အကျိုးပြုသည်ဟု ပြသပါသည်။ အကယ်၍ အစိုးရတစ်ရပ်သည် EU နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ် မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွင်းနှင့်အကြား ဆွေးနွေးခြင်းများကို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသည့် အဆင့်အတွင်းအထိဆက်လက်ပြုလုပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့နိုင်ငံများသည် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက် သူများနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ဤဖြစ်စဉ်သည်VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုးတက်မှုအပေါ် သက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံများသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းသို့ဝင်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်သောအခါ သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ချိန်တွင် ၎င်းတို့သည်သစ်တောကဏ္ဍနှင့်လက်ရှိစနစ်များအကြောင်း ခိုင်မာသောသတင်းအချက် အလက်များ ၎င်းတို့တွင် မရှိသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်များတွင် နိုင်ငံများသည် သတင်း အချက်အလက် ကွာဟချက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် သို့မဟုတ် လက်တွေ့တွင် တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်တစ်ခု၏ ရှုထောင့်များအားလုံး မည်ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ကို လေ့လာဖော်ထုတ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို လုပ်ဆောင် သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေနိုင်ပါသည်။ အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူတို့သည် အစိုးရနှင့် အခြားအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများကို ကူညီနိုင်သော ကြောင့် ဤလေ့လာမှုများတွင် သူတို့ကို ပါဝင်စေသင့်ပါသည်။
VPA သည် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ခြင်း
EU နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များ စဉ်းစားခြင်း
VPA နှင့် လိုက်လျောညီထွေသော စနစ်များ ဒီဇိုင်းစွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ လိုအပ်ချက်များကို နားလည်လာစေခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်းများတွင် ပြဿနာအကြောင်းရင်းများအားလုံးပါ၀င်စေရန် သေချာစေခြင်း
အသိအမြင်များသောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများပါသည်လေ့လာမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဥပမာ များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
ကင်မရွန်း။ ဥပဒေရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက် တွင်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှင့် သစ်တောကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်သော တွေ့ရှိချက်များ အပေါ်ပြန် လည်သုံးသပ်ခြင်း
အိုင်ဗရီကိုစ့်။ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အချက်တစ်ချက်စီနှင့်ဆက်နွယ်နေသော အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သော သစ်တောထွက်ထုတ်ကုန်များ၏ တရားဝင်မှုနှင့် နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးမှု တို့ကိုပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်လျက်စီစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
ဂါဘွန်း။ သစ်တောကဏ္ဍအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
ဂါနာ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသော ဖြစ်နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များအရ မတူညီ သော အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအပေါ် VPA ၏ လူမှုစီးပွားအကျိုးသက်ရောက်မှုအား အကဲဖြတ် ခြင်း
အင်ဒိုနီးရှား။ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ၍ VPA အလားအလာ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နည်းဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားသည် လက်ရှိအရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ နှင့်နီးကပ်စွာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်ရန် FLEGT နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ ကိုခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဈေးကွက်သုတေသန ကိုပါ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လိုင်ဘေးရီးယား။ လိုင်ဘေးရီးယားအတွက် VPA ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်များကို ဆန်းစစ် ခြင်းနှင့် လိုင်ဘေးရီးယားမှရေးဆွဲခဲ့သော အမျိုးသားအဆင့်သစ်နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် စနစ်ကိုလေ့လာခြင်း။
ထိုင်း။ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် သစ်အရင်းအမြစ်များ၊ ထိန်းချုပ် မှုအဆင့်များ၊ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် စီစစ်အတည်မပြုသည့်သစ်များ ထိန်းချုပ်ထားသော ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်အတွင်းရောက်ရှိသွားနိုင်သည့်ကွာဟနေမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်စွမ်းဆောင် မှုတစ်ခု၊
ရင်းမြစ်: FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: from Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု နှင့် နားလည်မှုအဆင့်သည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ပိုင်းအဆင့်များ နှင့် VPA ၏ ယေဘုယျအရည်အသွေးတစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်သည်။ အကယ်၍ဤအဆင့်တွင် VPA ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ခြေရှိလျှင် ဆွေးနွေးပွဲများကိုမစတင်မီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အစိုးရနှင့်အခြားအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ခြင်းများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ သစ်ကုန်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုအကြောင်းလေ့လာမှုအပေါ် ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် သစ်ခြေရာခံစနစ်များနှင့် တရားမ၀င်သစ်ခုတ်သည့် အတိုင်းအတာ အဆင့်များ စစ်ဆေးခြင်း
လက်ရှိ ဥပဒေ၊ စနစ်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများအပေါ် VPA မှ မည်ကဲ့သို့ လိုက်လျောညီထွေကျင့်သုံးနိုင်သနည်းကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း
အလွှာပေါင်းစုံပါ၀င်သည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့အ၀င်များသည် စံပြအဆိုအရ မိမိဘာသာ အရွေးချယ်ခံကြခြင်း
နိုင်ငံအများစုတွင် တရားဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲအဆင့်သို့ လျင်လျင်မြန်မြန်ကူးပြောင်းလေ့ရှိသည်။ သို့မှသာ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် အများဆန္ဒကို တည်ဆောက်ရန် အချိန်နှင့်နေရာ သက်သာမည် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်စား ပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးမှုများဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် သီးသန့် အကြောင်း အရာများကို စောနိုင်သမျှ အစောဆုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့မှာ အရေးကြီး သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ အကယ်၍ EU အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် VPA ဆွေးနွေးခြင်း ဆီသို့ဦးတည်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ယုံကြည်လျှင် အကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများမှ ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများကိုဖန်တီးရန် နှင့် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာများကို နားလည် ရန်ကူညီပံ့ပိုးမည့်အစီအစဉ်များကိုထောက်ခံအားပေးနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ စသည့် အခါ သူတို့သည်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ပြီး ပြည့်စုံနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
VPA ၏ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်သည် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအစိုးရမှ VPA အား မသင့်လျော် ဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ စတင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အခါများတွင် အဆုံးသတ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ စတင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ၌ အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအားလုံးမှ အခိုင်အမာထောက်ခံသည့်အခါ ချမှတ်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စာဖြင့်ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ထိုးထားသည်။
နိုင်ငံအများစုတွင် ဆွေးနွေးပွဲများစတင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအရ အတည်ပြု ချက် လိုအပ်သည်။ သာဓကအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ပါလီမန်မှလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုအပ်ခဲ့ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ သည် နိုင်ငံတော် ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုအပ်ခဲ့သည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှအစိုးရသည် VPA အား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါက EU ထံသို့ မည်သည်ကြောင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုစတင်ရန်ဆန္ဒရှိသည် နှင့် VPA မှ မည်သည်တို့ကိုမျှော်လင့်ထားသည် တို့ကို အကြမ်းဖျင်းရေးသားဖော်ပြပေးပို့ရသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အစိုးရ နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအကြား ပွင့်လင်းစွာဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းကို ဖော်ပြရန် လိုအပ်သည်။ အစိုးရသည် VPA မှ ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများမှ ထင်မြင်ယူဆသည့် စိန်ခေါ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
EU သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းသေချာသောအခါ နှစ်ဖက်အဖွဲ့တို့သည် VPA ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းများစတင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြေငြာကြသည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှ EU ထံသို့ VPA ဆွေးနွေးပွဲများစတင်ရန် တရားဝင်တောင်းဆိုရာ၌ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးထားခြင်းများ သို့မဟုတ် VPA ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထုတ်ဖော် ထားခြင်းများကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤဖြစ်ရပ်များတွင် နိုင်ငံအတွင်းနောက်ထပ် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းကိုတိုး၍ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို အလေးအနက်ထားခြင်းကို EU မှ အကြံပြုခဲ့ပါသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာ၌ နှောင့်နှေးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အကယ်၍ ပွင့်လင်းခြင်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက် သူများကိုယ်စားပြုခြင်းမပါဝင်လျှင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအတွက် အခွင့်အရေးနည်း သွားနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အစိုးရမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ် ခွင့်မပြုဘဲ အစိုးရမှ ပါဝင်သင့်သူများကို ရွေးချယ်ပါက အခြေအနေတင်းမာမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင် အများဆန္ဒရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အချို့ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအနေသည် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိ ဟု ခံစားရပြီး ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်သူများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပါယ် ကောက် ယူခြင်းဆီသို့ ဦးတည်စေခဲ့ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်သူများကို ထွက်ခွာ သွားစေသည် အထိ ဦးတည်စေခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် VPA အပေါ်စိတ်ဝင်စားသည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို အသေးစိတ် ဖော်ထုတ် ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများကိုသာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အခြားပါဝင်နိုင်ခြေရှိသူများကိုချန်ထားခဲ့ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ကိုယ်စားပြုခြင်းသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်အဆင့်တွင် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းရန်အချိန် ယူခဲ့ရ သည်။ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအဆင့်၌ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း သည် နယ်ပယ်ပိုမို ကျယ်ပြန့်ခဲ့လျှင် နှောင့်နှေးမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ပြင်ဆင်မှုများအလွန်အမင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင် VPA အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ကုမ္ပဏီအခြေပြု ထောက်ခံချက်စံနှုန်းများ၏ အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ တရားဝင်မှုစံနှုန်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သည့် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော အများဆန္ဒပေါ်ထွက်လာ ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း မှုများစတင်သောအခါ ပါဝင်သည့်နိုင်ငံသည် ၎င်းက ပြည့်စုံလုနီးပါး ဖြစ်သည်ဟုယူဆထားသည့် တရားဝင်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ဥရောပကော်မရှင် နှင့်မျှဝေခဲ့ ပါသည်။
သို့ရာတွင် ဥရောပကော်မရှင်အနေဖြင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်သည် စိုးရိမ်မှုများကိုအပြည့် အဝမဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့သလို တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်တွင် ရှင်းလင်းစွာတင်ပြထားခြင်းမရှိဟု ယူဆခဲ့ပါ သည်။ ဤဖြစ်ရပ်တွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအကြား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း သည် အတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစောပိုင်းတွင် လမ်းလွဲသွား ခဲ့ပါသည်။
Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting.9October 2013, Brussels. [အင်တာနက်မှ PowerPoint presentation အားရယူရန်]